Cocktail clove - fomba fahandro
Ny jirofo dia iray amin'ireo zava-manitra malaza indrindra eran'izao tontolo izao. Ny fampiasana azy dia mifandraika indrindra amin'ny lovia hena sy trondro. Sarotra ny maka sary an-tsaina ny fihinanam-borona raha tsy misy an'io zava-manitra io.
Ohatra, ny egyptiana dia nanao rojo tamin'ny haingon-tsakafo manitra ary noravahan'izy ireo taminy ny maty. Ary any Chine dia tsy mahazo mankany amin'ny amperora ny tandapa raha tsy mitsako ny jirofo.
carnation manana fananana anti-milaza zavatra sy manafoana. Inoana fa ny rojo mihantona dia afaka manala ny areti-mandringana avy ao an-trano, ary ny mangotraka ireo tsimoka dia afaka manala ny kôlera.
Any amin'ny firenena aziatika sy arabo, ampiana jirofo amin'ny lovia legioma, zava-pisotro ary zava-mamy. Any an-tanindrazany any Indonezia, any Moloka, dia ampiana sigara ny jirofo. Ny fofon'ireo sigara ireo dia mameno ny trano fisakafoanana sy trano any Indonezia.
Miaraka amin'ny fanampian'ny jirofo, vita ny liqueur vavony mangidy, zava-pisotro mafana misy divay, totohondry, compotes ary ranom-boankazo. Hindus, mampiasa jirofo ho fanamaivanana ny fanaintainana, dia matoky fa ny fampiasana matetika an'io zava-manitra io dia tsy hanatsara ny toe-po fotsiny, fa hampitombo be koa ny fanaovana firaisana. Te-hanome anao zava-pisotro misy alkaola miaraka amina fanampin-jirofo aho.
Atambaro rano 250 ml miaraka amin'ny divay latabatra fotsy iray litatra, asio jirofo vitsivitsy eo ary andrahoy.
Afetaho ny atody roa miaraka amin'ny siramamy efatra sotro mandra-pahatonga ny fotsy. Apetaho amin'ny hafanana ambany ny vainga vokatr'izany.
Mandritra ny fikorontanana, arotsaho ny divay mafana, tazomy amin'ny hafanana, mandra-pahatongan'ny volony. Aza mandrahoina! Ny biscuits dia tsara amin'ity cocktail ity.
Cocktail miaraka amin'ny jirofo "Winter Mojito"
Cocktail mahafinaritra izay azonao omanina mora foana rehefa mipetraka ao an-trano. Ampy ny manomana dite mint mialoha, izay mahandro jirofo vitsivitsy.
Avy eo ampio tantely, siramamy (tsiro) amin'ny dite, arotsaho ny ronono. Azonao atao ny manisy haingo ny ririnin-dronono ririnina Mojito miaraka amin'ny ravina mint.
Divay divay kilasika
Asio jirofo (6-7 pcs) ary nutmeg mba hanandrana any Tiorka. Araraka ao Tiorka ny iray ampahatelon'ny vera. Andrahoy. Andrahoy mandritra ny iray minitra ary atsofohy mandritra ny 10 minitra.
Afana amin'ny tavoahangy ny divay mena maina. Araraka ao anaty vilany ny vilanon'ilay vorontsiloza. Mandritra izany fotoana izany, ampio siramamy iray sotro.
Cocktail tsy misy alikaola miaraka amin'ny jirofo "hariva any Edelweiss"
Potsero ny blackberry vitsivitsy, ampio siramamy amandy 30 ml, sakamalaho 20 buckthorn an-dranomasina, puree 30 blackberry, ampio sakay 1 g, jirofo vitsivitsy, hazo kanelina ary rano 100 ml. Afanaina izany rehetra izany nefa tsy mahandro.
Ny tantaran'ity fisotroana ity dia miorim-paka ao amin'ny tantaran'i Hemingway momba ny fisotroana bar any an-tendrombohitra Alpine. Ny nofinofin'ireo mponina dia ny hahatongavana amin'ilay bara ankafizin'izy ireo "Edelweiss" mba hisitraka zava-pisotro mafana rehefa avy nandany fotoana ny fanaovana ski.
Nipetraka teo alohan'ny fatana izy ireo, nanafatra cocktail misy jirofo, nijery ny afo ary nitadidy ireo fotoana nahafinaritra indrindra tamin'ny fiainana.
Cocktail "Aperol-syringe" - zava-pisotro mahaliana ho an'ny tanora
James Bond Cocktail - Zava-pisotro Sarimihetsika mahafinaritra an'ny Hero
Ahoana ny fomba fanaovana cocktail gin sy tonika
Cocktail miaraka amin'ny liqueur kafe - fomba fahandro
Prev Ny momba ny filomanosana amin'ny fihenan'ny lanja rehetra
Manaraka Inona no hatao amin'ny offal
61 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 4,854.